မြေကြီးထဲကအာဟာရဓာတ်တွေကို ဘာကလျော့ကျစေတာလဲ? – Gazunmyo
Published by Gazunmyo on 2020 အောက်တိုဘာ 22nd 2020 အောက်တိုဘာ 22nd
အစေ့တွေကနေ အပင်ပေါက်လာတာနဲ့သူတို့ဟာ မြေကြီးထဲက အာဟာရတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ သစ်ရွက်တွေ ၊ အမြစ်တွေ နဲ့သီးနှံတွေအဖြစ်နဲ့ဖူးပွင့်ကြပါတယ်။ အပင်တွေ သဘာဝအတိုင်းသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ထည်တွေကဆွေးမြေ ြ့ပိုကွဲသွားပြီး မြေဆီလွှာအတွက် အာဟာရ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆိတ်လေးတစ်ကောင် ဒါမှမဟုတ် နွားလေးတစ်ကောင်လိုမျိုး အသီးအရွက်စားတဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးမျိုးကရောက်လာပြီးတော့ အပင်တွေကိုစားပစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကို စားလိုက်တဲ့ သတ္တဝါလေးက အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူပြီး ပိုလျှံတဲ့အရာတွေကိုတော့ မစင်အဖြစ်နဲ့စွန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီ့မှာ သူစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အညစ်အကြေးက နောက်အပင်မျိုးစိတ်အတွက် အစာအာဟာရဖြစ်လာပါတော့တယ်။
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ဒီလည်ပတ်နေတဲ့ စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ဖြိုခွဲပစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီအပင်တွေကို စားဖို့ဆွတ်ယူ ကြ ရောင်းချကြတဲ့အခါမှာ ဒီအာဟာရတွေဟာ လယ်ယာမြေ ကနေ တော်တော်ဝေးဝေးကို ရောက်ရှိသွားပြီး အချိန်တော်တော်များများမှာ ပြန်မရောက်လာနိုင်တော့ပါဘူး။
အပင်တွေအမြောက်အမြားစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအပင်တွေဟာ မရေတွက်နိုင်တဲ့ အာဟာရတွေကို မြေကြီးထဲကနေစုပ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမြေဆီလွှာပေါ်မှာပဲ ဆက်ပြီးသာ စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင် မြေကြီးထဲကအာဟာရတွေအားလုံး ကုန်ခမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ အဝါရောင် သစ်ရွက်တွေ ၊ သေးငယ်တဲ့ အရွက်တွေ နဲ့ပိန်ပါးပါး ပင်စည်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး အားနည်းသွားမှာပါ။
(Translated by Shweyi)
တီကောင်လေးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေဆီလွှာကိုဘယ်လိုကူညီပေးနေလဲ ?
စိုက်ပျိုးရေးသမားတော်တော်များများက တီကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် သိပ်မသိကြပါဘူး။ ဒါကလဲ သူတို့က မြေကြီးထဲမှာအချိန်တော်တော်ကြာကြာနေလေ့ရှိကြပြီး ကြက်စာအဖြစ်လောက်ပဲ အသုံးပြုကြတဲ့အတွက် သတိမမူမိကြတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တီကောင်လေးတွေဟာ ကြက်စာဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ သူတို့က သဘာဝတရားကပေးထားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေပါပဲ။ တီကောင်လေးတွေဟာ မြေဆီလွှာထဲမှာ သွားလာလှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေကအပင်တွေ နဲ့မြေကြီးအတွက်ကို အကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြစ်စေပါတယ်။ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်တွေအရ သူတို့ကမြေကြီးကိုအာဟာရဖြစ်ေ စတယ် ၊ ရေစီးဆင်းမှုကို မြန်ဆန်စေပြီးတော့ မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းမှုကိုပိုပြီးတောင့်တင်းခိုင်မာစေတယ်။ Read more…
ကိုယ့်စိုက်ပျိုးမြေက တီကောင်လေးများကို စောင့်ရှောက်ကြမယ်။
တီကောင်လေးတွေဆိုတာ အထိမခံနုနယ်ပြီးတော့ စိုစွတ်တဲ့မြေကြီးမှာ ရှင်သန်ကျက်စားတဲ့သတ္တဝါလေးတွေပါ။ သူတို့လေးတွေဟာ စိုစွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှင်သန်နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာအရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ အကျိအချွဲဂလင်းလေးတွေကိုသုံးပြီး အသက်ရှုကြရတာဖြစ်လို့စိုစွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကသာ ဒါကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မှာပါ။ စိုထိုင်းမှုသာမရှိဘူးဆိုရင် ဒီတီကောင်လေးတွေဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ခြောက်သွေ့ပြီးသေဆုံးသွားမှာပါ။ သူတို့လေးတွေမှာ မျက်စိ ၊ နား စတာတွေမရှိပေမဲ့လို တုန်ခါမှုကိုခံစားသိရှိနိုင်ကြပြီး သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ အလင်းကိုအာရုံခံနိုင်တဲ့ တစ်ရှုးလေးတွေပါတာကြောင့် အလင်းရောင်ကိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေပေါ်မှာ တီကောင်လေးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့မြေဟာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေတဲ့ Read more…
မြေကြီးရဲ့ pH က ဘာလို့အရေးကြီးတာလဲ?
မြေဆီလွှာရဲ့ phက အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပင်တွေက မြေကြီးထဲကနေပြီးတော့ ဘယ်လိုအာဟာရတွေကိုစုပ်ယူမလဲဆိုတာကို pH ကသက်ရောက်စေလို့ပါပဲ။ pHကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင် 0.0 ကနေ 14.0 အထိရှိပြီး 0.0 ကတော့ အက်ဆစ်ဓာတ်အများဆုံးပါ။ 7.0 ဓာတ်ပြယ်နေတာ (သို့မဟုတ်) သာမန်ရေမှာရှိတဲ့ pH ပမာဏဖြစ်ပြီး 14.0ကတော့အယ်ကာလိုင်းဓာတ်အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲမိတ်တွေတို့လဲ pH ကဘာလဲဆိုတာသိချင်ကြမှာပါပဲ။P ဆိုတာ သင်္ချာဘာသာရပ်မှာတော့ “-log10” ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီး H ကတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် Read more…
Yangon research farm dedicated to saving seeds and growing the city’s finest organic vegetables
Gazunmyo Farms | Hmawbi Township Yangon, Myanmar